Coral Reef: ပြောင်းလဲသွားတဲ့နွေ
smiling flower said on April 16, 2014 at 10:47 AM
ရသစာပေ တစ်ပုဒ်ပါပဲ ဇွန်။
သက်ဝေ said on April 16, 2014 at 10:51 AM
ညို ဖတ်စရာစာလေးက ချစ်စရာလေး...း)
Shinlay said on April 16, 2014 at 10:56 PM
ညီမနေကောင်းလား။ Happy new year...to you and your family.
ဇွန်မိုးစက် said on April 17, 2014 at 11:51 AM
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ အစ်မပြုံး၊ အစ်မသက်ဝေနဲ့ အစ်မရှင်လေး... ဇွန်နေကောင်းပါတယ်။း)
ညိုလေးနေ said on April 18, 2014 at 8:26 PM
ရှည်လျားတဲ့ နွေအပူတွေကို ပြင်ပကရှောင်လို့မရပေမယ့် အတွင်းထိတော့ မရောက်စေချင်ဘူးဇွန်။
ငါကြိုက်တဲ့ စိတ်ဟောင်းလူဟောင်းတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရှိတဲ့နင် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပြီး ရေးစရာအတွေး အသစ် အသစ်တွေ ရပါစေ။
Sonata Cantata said on April 18, 2014 at 8:49 PM
ပိုဆိုးတာက လက်နှစ်ဘက်က allergy တွေ...ပူရင် ထ လာလို့
ဒီအမကြီး တွေ့ရင် ညီးတာပဲလို့ ထင်ရော့ ဇွန်ရေ...
Anonymous said on April 18, 2014 at 11:52 PM
ညို့ကို ပေးစာလေးတွေ ထပ်ရေးပါဦး
ဇွန်မိုးစက် said on April 19, 2014 at 11:12 PM
ရေးစရာအတွေးတွေ ခေါင်းထဲဝင်လာနေပေမယ့် အချိန်သိပ်မရလို့ စိတ်ရှိတိုင်း ချမရေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ညို။ ဟိုတစ်ခါ ညို တောင်းဆိုထားတဲ့ ခွန်သီတို့အကြောင်း ရေးရင်ကောင်းမလားလို့ စိတ်ကူးနေတယ်။း)
ငြိမ်နေတဲ့ မမသီတာဆီက စာအသစ်တွေ တက်လာတာ တွေ့တယ်နော်။ ;) ညည်းတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး မရယ်၊ ဇွန်ကိုယ်တိုင်က စာတစ်တန် ပေတစ်တန်နဲ့ ညည်းထားမှကိုး။ :D
အဲ... သူသူလည်း ညို့ဆီပေးစာတွေကို အားပေးတယ်ပေါ့။ အချိန်ရရင် ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်မယ်နော်။း)